Muqdisho oo laga xusay maalinta Carruurta Afrika+Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Muqdisho oo laga xusay maalinta Carruurta Afrika+Sawirro
uMas’uuliyiin kala duwan oo ka hadlayay maalinta caruurta Afrika ayaa si weyn uga hadlay baahiyaha loo qabo in xilligan la joogo la garab istaagi caruurta Soomaaliyeed oo wajahaya dhibaatooyin kaladuwan,si ay mustaqbal fiican u helaansi ay u noqdaan kuwo loo aayo mustaqbalka.
Waxaa ay sigu jiraan mas’uuliyiinta kahadashey arrintaasi,Guddoomiye kuxigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada Basmo Caamir Shikeetei,xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya,iyo ururada bulshada Rayidka.
Maryan Axmed Maxamuud oo ah madaxa qeybta carruurta ee IIDA oo soo qaban qaabisay kulanka ayaa sheegtay in ujeedkooda uu yahay in la dhiiro geliyo carruurta Soomaaliyeed,kuwaasi oo badan kood ku nool, nolol aad u liidata.
Basmo Caamir Shakeeti guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir iyo Xildhibaan Qadra Dukaale oo kamid ahaa mas’uuliyiinta ka hadashey maalinta carruurta Afrika ayaa balan qaaday in ay kaalin ka qaadan doonaan sidii loo heli lahaa wadiiqooyin lagu dhiirogeliyo carruurta Soomaaliyeed.
Waxay hayd 1991 markii loo asteeyay maalinta carruurta Afrika,taasi oo ka dambeysay kacdoonkii magaalada Soweto, ee Koonfur Afrika ay sameeyeen kumannaan carruur ah,kuwaasi oo ka bannaan baxayay arrimo ay kujiraan xuquuqdooda waxbarasho iyo mida nololeed,waxaana la toogtay kumannaan kale oo carruurtaasi kamid ah.